Kukho isizathu sokuba ubize "nguJohn."
Ukuze impucuko ihlangane kwaye isebenze, ucinga ukuba abantu baya kufuna iimpahla zangasese. Kodwa iirekhodi zamandulo eziye zafika malunga ne-2800 BC zibonise ukuba izindlu zangasese zangaphambili zazizithengiswayo kuphela kwizindlu ezixhamle kakhulu kwiindawo zase-Indus Valley zokuhlala kwi-Mohenjo-daro.
Izihlalo zobukhosi zazilula kodwa zinengqondo ngexesha layo. Yenziwe ngezitena ngezihlalo zokhuni, zazibonisa iiflathi ezithutha inkunkuma kwiindawo zamanzi.
Le nto yenziwe yenziwe yinkqubo ephezulu kakhulu yokuthuthwa kwamanzi kwangexesha, elalibonisa ubuchwepheshe obuninzi bokuncedisa amanzi kunye nococeko lwezococeko. Ngokomzekelo, iindlu ezisuka ezindlwini zaxhunyiwe kumanzi amaninzi amakhulu kunye nokuthuthwa kwamanzi okuphuma kwindlu kwakuxhunyiwe kumgca wendlela yokuthuthwa kwamanzi.
Iingxowa ezisetyenziselwa ukusetyenziswa kwamanzi ukulahla inkunkuma ziye zafunyanwa eScotland ezibuyela kwixesha elifanayo. Kukho ubungqina bezindlu zangasese zangaphambili eKrete, eYiputa nasePersia ezazisetyenziswa ngexesha le-18 leminyaka BC. Iingxowa ezixhunyiwe kwinkqubo yokucoca ziye zaziwa kakhulu kwizindlu zokuhlambela zaseRoma, apho zazibekwe khona kwiindawo zokuthungula.
Phakathi kwexesha eliphakathi, amanye amakhaya atyhila oko kwakubizwa ngokuba yi-garderobes, ngokuyinqobo umgodi kwisitela ngaphaya kombhobho owawuthatha indawo yokulahla ebizwa ngokuba yi-cesspit. Ukulahla inkunkuma, abasebenzi beza ebusuku ukuze bahlambulule, baqokele inkunkuma baze bathengise njengesiqhumiso.
Ngama-1800, amanye amakhaya aseNgesi ayenzela ukusebenzisa inkqubo engenamanzi, engasiyo yinkqubo ebizwa ngokuthi "umhlaba omile owomileyo." Waza wangena ngo-1859 nguMfundisi Henry Moule weFordington, iiyunithi zombini, ezikhoyo zihlalo zokhuni, ibhakethi kunye nesitya , ixubene nomhlaba owomileyo kunye namaqhekeza ukuvelisa umquba onokubuyiswa ngokukhuselekileyo emhlabathini.
Unokuthi yile yezindlu zangasese zokuqala zokuthungela ezisebenzisayo namhlanje kwiipaki nakwezinye iindlela zendlela e-Sweden, eCanada, e-US, e-UK, e-Australia nase-Finland.
Isakhiwo sokuqala sezindlu zangasese esicoca namhlanje senziwa ngo-1596 nguSir John Harington, umthengisi we-english. Ebizwa ngokuba yiAjax, uHarington wachaza isixhobo kwiphephancwadi ebizwa ngokuthi "Intetho Entsha yeSifundo seState, esibizwa ngokuba yi-Metamorphosis yeAjax," eyayinemifanekiso engamangalelwa ku-Earl kaLeicester, umhlobo osondeleyo wooTyurekazi u-Elizabeth I. ivalve evumela amanzi ukuba agile aze aphuphe isitya esingenanzi. Ekugqibeleni wayezakufaka imodeli yokusebenza ekhaya lakhe eKelston nakumfazikazi kwiNdlunkulu yaseRichmond.
Nangona kunjalo, kwada kwafika ngo-1775 ukuba i-patent yokuqala yendlu yangasese ekhutshweyo yenziwe. I-inventor Alexander Cumming yenzelwe ukuguqulwa okubalulekileyo okubizwa ngokuba yi-S-mgibe, ipayipi edibeneyo engaphantsi kweSitya ezele ngaphantsi kwesitya esityiwe ngamanzi esakha isitywinela ukukhusela i-odor smelling odors from rising up. Kwiminyaka embalwa kamva, inkqubo yeCumming yaphuculiswa ngu-inventor uJoseph Bramah, owatshintsha i-valve ehambayo phantsi kwesitya esine-flap hinged.
Kwakuphakathi kwekhulu le-19 ukuba "amanzi avaliweyo," njengoko ayebizwa, aqala ukuzuza phakathi kwabantu.
Ngo-1851, isiNgesi iplanzi egama linguGeorge Jennings ifake indlu yangasese yokuqala yokuhlawula kwi-Crystal Palace eLondon Hyde Park. Ngelo xesha, kubiza abathengi beepenki ukuba bawasebenzise kwaye baquka izinto ezongezelelweyo ezifana nethawula, ikhefu kunye nezihlangu. Ekupheleni kwee-1850, ezininzi izindlu zasekhaya zaseBritani zafika zixhotyiswe ngezindlu zangasese.
Ibhonasi: Iimpawu zamaKhoyile
Iibhokhwe ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba yi "crapper." Oku kuchazwa nguSir Thomas Crapper , umphandi weenkampani uThomas Crapper kunye neCo zenziwe kwaye zathengisa umzila oqhelekileyo wezindlu zangasese ekupheleni kwee-1800. Amalungu oonyana basebukhosini, aquka iPrince Edward noGeorge V baphumelela kwiindawo zabo zokuhlala kunye neenkqubo ze-Crapper zokucoceka. Igama lakhe liza kufana nelinye indlu yangasese emva kwamajoni aseMelika afike ngexesha le-WWI aqala ukuyisebenzisa njengento ebhekisela kuyo xa ebuyela kumazwe.
Kwaye nangona kungekho mntu onokuthi ngokuqinisekileyo ukuba indlu yangasese ibizwa ngokuba "nguYohane," abanye bangathanda ukucinga njengento yokuhlonela umenzi, uJohn Harington. Abanye, nangona besithi mhlawumbi i-Jake, eyafumaneka kwi-Ajax.
Iindaba zezingane malunga nokuBambisana
Izixhobo eziphambili ukusuka kuma-1950s Ngama-1990